पत्याउनु हुन्छ ! टाउको र शरीर अलग गरेपछि पनि यो कुखुरा कसरी दुई वर्ष बाँच्यो ? | Rajmarga
पत्याउनु हुन्छ ! टाउको र शरीर अलग गरेपछि पनि यो कुखुरा कसरी दुई वर्ष बाँच्यो ?
के कुनै मानिस वा जनावर टाउको काटिएपछि पनि बाँच्न सक्छ ? तपाई यसलाई बकवास भन्नु हुनेछ.. किनभने यस्तो त हुनै सक्दैन । तर, यस्तै भयो ।
अमेरिकाको कोलोराडोमा ल्योयड ओस्लेन पोल्ट्री फार्म चलाउँथे । १८ सेप्टेम्बर १९४५ मा उनले मासु खानका लागि एउटा कुखुरा काटे । तर भुलबस उनले कुखुरालाई बाकसमा राख्नुको साटो साइटमा राखे । तब काटिएको कुखुरा बेपत्ता भयो ।
माइक नामको यो खुकुरा काट्ने क्रममा ल्योय्डले गल्ती गरेका थिए, जसका कारण कुखुरा माइकको टाउकोको अघिल्लो भाग काटेका थिए । तर अवश्य पनि नशा र एउटा कान बच्यो । जसबाट कुखुराले स्वास लिन सक्यो ।
ल्योय्डलाई कुखुराप्रति दया आयो र उनले त्यसलाई ड्रापको माध्यमबाट दुध र मकैको दाना खुवाउन थाले ।
चाँडै नै यो विचित्र कुखुराप्रति मानिसको आकर्षण बढ्न थाल्यो । मानिसहरु टाढाटाढादेखि यो कुखुरा हेर्न आउन थाले । ल्योय्ड एउटा यस्तै मनोरञ्जन कम्पनीसँग जोडिए, जसले विभिन्न स्थान पुगेर जनावरको शो देखाउने गर्दथ्यो । यसबाट उनले राम्रो आम्दानी गरे ।
त्यसक्रममा दर्जनौ पत्रिका अझ टाइमजस्तो चर्चित पत्रिकामा पनि ल्योय्डको अन्तर्वार्ता लियो र कुखुरा माइकको तस्वीर प्रकाशन भयो । त्यतिबेला कुखुराको मूल्य दश हजार डलर लगाइएको थियो ।
मार्च १९४७ मा एक दिन शोबाट फर्कने बेला ल्योय्ड एउटा फलाम नजिक रोकिए। अचानक आधा रातमा माइकको मृत्यु भयो । मर्कैको एउटा दाना कुखुराको घाँटीमा अड्केको थियो । अनजानमै ल्योय्डले खाना खुवाउने सिरिन्ज शो भएको ठाउँमै छोडेका थिए । अन्ततः टाउको काटिएको डेढ वर्षपछि माइकको मृत्यु भयो । पोस्टमार्टमबाट थाहा भयो कि कुखुरा माइकको टाउको काटिए पनि दिमागको हिस्सा बाँकी थियो, जसबाट उसको शरीर संचालन भइरहेको थियो । एजेन्सी
Previous post: जाने होइन त कोरिया, आजबाट खुल्यो आवेदन
Next post: गायक रमेश श्रेष्ठ मेलोडि “साँझ परे पछि तान्न मन लाग्छ च्वास्स च्वास्स” भन्दै भट्टीमा भेटिए( भिडियो सहीत)